အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုအပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်ပေါ်တွင်
PLoS တစ်ခုမှာ။ 2013; 8 (2): e55162 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0055162 ။ EPub 2013 ဖေဖော်ဝါရီ7။
Romano က M, Osborne LA က, Truzoli R ကို, ရိဒ် P ကို.
Università degli Study di Milano, မီလန်, အီတလီ။
အဆိုပါလေ့လာမှု၏ချက်ချင်းသက်ရောက်မှုစူးစမ်း အင်တာနက် ယင်းခံစားချက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအပေါ်ထိတွေ့မှု အင်တာနက် စွဲနှင့်အနိမ့် အင်တာနက်-users ။ သင်တန်းသားများကိုအဆင့်စူးစမ်းဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဘက်ထရီပေးခဲ့ အင်တာနက် စှဲမွဲမှု, ခံစားချက်, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါ, schizotypy နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာစရိုက်များ။ သူတို့ဟာထို့နောက်မှထိတွေ့မှုပေးခဲ့ အင်တာနက် 15 မိအဘို့နှင့်စိတ်ဓါတ်များနှင့်လက်ရှိစိုးရိမ်စိတ်များအတွက်ပြန်လည်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အင်တာနက်ကို စှဲမွဲမှု နှစ်ရှည်လများစိတ်ကျရောဂါ, ထကြွလွယ်သော nonconformity နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာစရိုက်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ မြင့်သော အင်တာနက်-users ကိုလည်းအောက်ပါခံစားချက်အတွက်သိသာကျဆင်းခြင်းပြသ အင်တာနက် နိမ့်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သုံးစွဲခြင်း အင်တာနက်-users ။ အဆိုပါထိတွေ့၏ချက်ချင်းအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှု အင်တာနက် ၏ခံစားချက်အပေါ် အင်တာနက် စွဲများတွင်လျှင်မြန်စွာ re-ပါဝငျခွငျးအားဖွငျ့သူတို့ရဲ့အနိမ့်စိတ်ဓါတ်များကိုလျှော့ချရန်ကြိုးစားနေသောသူတို့ကိုတစ်ဦးချင်းစီတိုးအသုံးပြုမှုအထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ အင်တာနက် အသုံးပြုပါ။
အယ်ဒီတာ: Cesar အေ Hidalgo, MIT ကအမေရိက၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းဟူသောဝေါဟာရကိုဖြစ်လာခဲ့သည်ကတည်းကကျယ်ပြန့်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာပေအတွက်အခြေအတင်ဆွေးနွေး '' အင်တာနက်စွဲလမ်းမှု '' တစ်ဝတ္ထု psychopathology အဖြစ်မှတ်ဖြစ်လာသည်  ကောင်းစွာတစ်ဦးချင်းစီ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းငှါ . '' အင်တာနက်စွဲ '၌အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏အာရုံကွဲပြားပေမယ့်လောင်းကစားများအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုနေသည်  နှင့်ညစ်ညမ်း  ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီအကြားဘုံဖြစ်ကြသည်။ အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုပုဂ္ဂိုလ်များ '' အသက်တာ၏ရှုထောင့်တစ်ခုကျယ်ပြန့်အနှံ့တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် , အဖြစ်ကသူတို့မိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာကိုရှုထောင့်အပေါ် ။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာအပြုအမူတစ်ခုဒရိုင်ဘာအဖြစ်ပြုမူနိုင်သည့် '' အင်တာနက်စွဲ 'အပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏ချက်ချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုရှာဖွေစူးစမ်းနီးပါးမျှသုတေသနရှိခဲ့သည်။
အဲဒါကို 'အင်တာနက်စွဲ' 'အဖြစ်တနျးနိုင်သူကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုပူးတွဲနေကြလို့ပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ၏အကွာအဝေးကိုထင်ရှားစွာပြကြောင်းလူသိများသည် ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါအဖြစ် , , အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှုနှင့် hyperactivity ရောဂါ , အဖြစ်လူမှုရေးအထီးကျန်မှုတွေနဲ့အနိမ့် Self-လေးစားမှု -။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်လည်းကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စရိုက်များတဲ့အကွာအဝေးတငျပွနိုငျ ထိုကဲ့သို့သော Impulse အဖြစ် , sensation- နှင့်အသစ်အဆန်း-ရှာကြံ ,  တခါတရံကျူးကျော်များ၏အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့် , ။ အင်တာနက်စွဲလမ်း၏အန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်သည်သူမြား၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စပ်လျဉ်းသောဤတွေ့ရှိချက်သိကောင်းစရာများများမှာသော်လည်း, Proximity (ဥပမာ, စိတ်ရင်းနှင့်အားဖြည့်), အဖြစ်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ distal အကြောင်းတရားများကပါဝငျတဲ့မော်ဒယ်ထူထောင်နားလည်မှုနှင့်ကုသဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်ထိပ်တန်းဖြစ်ပါသည် အဆိုပါရောဂါ၏ -။ ဒီအဆုံးရန်, လက်ရှိလေ့လာမှု differential ချက်ချင်းပြဿနာအင်တာနက်အပြုအမူဖော်ပြရန်ဘူးသောသူတို့အဖို့နှိုင်းယှဉ်လျှင်သက်ရောက်မှုများကိုအင်တာနက်စွဲများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များအင်တာနက်ရှိမရှိထိတွေ့စူးစမ်း။
ဒါဟာမကြာခဏအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုထိုကဲ့သို့သောအသုံးပြုမှုများ၏အပြုသဘောဆောင်အားဖြည့်အကျိုးဆက်များအားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားကြောင်းယူဆလျက်ရှိ၏ ဥပမာ, ဖျော်ဖြေရေး၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှု, တစ်ဦး pass-အချိန်အဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်သတင်းအချက်အလက်-ရှာသုံး ။ ထို့အပွငျကမြင့်မားသောအသုံးပြုမှုကိုဆက်ဆက်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအသုံးပြုသူများသည်အတွက်, ထိုကဲ့သို့သောခွဲခြားသတ်မှတ်-ရှင်းလင်းချက်အဖြစ်အချက်များအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည် ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အပြုသဘောဆောင်သည့်အားဖြည့်အကျိုးဆက်များနှင့်ဆက်စပ်မရကအခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်များ, မကြာခဏပြဿနာအပြုအမူတွေကိုမြင့်မားထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရရှိကြ၏။ မကြာခဏမှတ်ချက်ချနေသည် ဥပမာအားဖြင့်, အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေများမှထိတွေ့မှုပြဿနာလောင်းကစားဝိုင်းအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြရန်သောသူတို့အားအတွက်ပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်နှိုးဆော်ခြင်းပါဘူး , . အလားတူပဲ, ပြဿနာအပြုအမူတွေ၏အရာဝတ္ထုမှထိတွေ့မှုစိတ်ဓါတ်များလျှော့ချရန်ကိုတွေ့ထားပြီ အထူးသဖြင့်အတွင်း ညစ်ညမ်းစွဲတစ်ဦးချင်းစီ , ။ အင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်ဤအကြောင်းရင်းများ (ဆိုလိုသည်မှာလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ညစ်ညမ်း) ၏နှစ်ဦးစလုံးပြင်းထန်စွာပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်အဖြစ် , , ဒါကြောင့်ကောင်းစွာသည်ဤအချက်များလည်းအင်တာနက်စွဲလမ်းမှအထောက်အကူဖြစ်စေခြင်းအလိုငှါဖြစ်မည်အကြောင်း ။ အမှန်မှာကပြဿနာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု၏ထိုကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမိမိတို့အတွက်အဲဒီအနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်များကိုမှလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်ဤမြင့်မားသောဖြစ်နိုင်ခြေပြဿနာအပြုအမူတွေအတွက်ထပ်မံထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို generate စေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည် .
အနည်းငယ်သာလက်ရှိပြဿနာအင်တာနက်အပြုအမူတွေနှင့်အတူသူတို့ကိုအင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏ချက်ချင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှု, မော်ဒယ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, ကုန်အံ့တစျယောကျတညျးသင့်လျော်သောဆောင်ရွက်ချက်နှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်အဖြစ်သို့သော်နေဆဲခက်ခဲသည်။ ဒီပေးထားသောလက်ရှိလေ့လာမှုအင်တာနက်ထိတွေ့မှု differential high- နှင့်အနိမ့်အင်တာနက်သုံးစွဲသူများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်ထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိစူးစမ်း။ ဒီအဆုံးရန်, နမူနာသူတို့ရဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုကသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ disrupts သောအတိုင်းအတာအဘို့အအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို '' စိတ်ဓါတ်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ပြီးတော့တိုင်းတာခဲ့ကြသည်အင်တာနက်ထိတွေ့မှုသူတို့အားအင်တာနက်စွဲအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့သည်ဆိုပါကဆုံးဖြတ်ရန်, သူတို့ကဒါဆိုသူတို့စေလိုကြောင်းဆိုက်ဘ်ဆိုက်များမှဝင်ရောက်ခွင့်ခွင့်ပြုခဲ့သည်, ပြီးတော့စိတ်ဓါတ်များနှင့်လက်ရှိစိုးရိမ်စိတ်သူတို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်အဘို့အ re-အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာအပြုအမူတွေမပါဘဲ.
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုသူများကို၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၏ယခင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှင့်အတူလိုက်ဖက်မှုသေချာစေရန် , , , , ဒီလေ့လာမှုလည်းအင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများအကြားအသင်းအဖွဲ့များစူးစမ်း။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ရဲ့နှစ်ရှည်လများစိုးရိမ်စိတ်အဆင့်ဆင့်နှင့်စိတ်ကျရောဂါအကဲဖြတ်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုတစ်ခုဘက်ထရီအားပေးခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, schizotypy နှင့်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာတူသောစရိုက်လက္ခဏာပါဝင်သောပူးတွဲရောဂါ၏ဤအခြေအနေတွင်ဝတ္ထုအတိုင်းအတာနှစ်ဦးစလုံးစိတ္တအဖြစ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်  နှင့်လူမှုရေး-အထီးကျန်မှုတွေ  ယခင်ကအင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။
ဒီသုတေသနအတွက်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်စိတ်ပညာကျင့်ဝတ်ကော်မတီ, ဆွမ်ဆီးတက္ကသိုလ်မှဦးစီးဌာနမှရရှိသောခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုဤလေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့ရဲ့စာဖြင့်ရေးသားအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ပေးသဖြင့်, ကျင့်ဝတ်ကော်မတီဒီသဘောတူညီခကျြလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
ခြောက်ဆယ်စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆွမ်ဆီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းပေါ်နှင့်ဝန်းကျင်ကြော်ငြာခဲ့သည့်တစ်ဦးစိတ်ပညာလေ့လာမှုပါဝင်မှုများအတွက်တောင်းဆိုမှုမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ 27 အထီးနှင့်အ 33 အမျိုးသမီး 24.0 တစ်အတောအတွင်းအသက်အရွယ်နှင့်အတူရှိခဲ့သည်+2.5 နှစ်ပေါင်း။ သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူအားမျှ၎င်းတို့၏ပါဝင်မှုများအတွက်မဆိုငွေပေးချေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
အင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်ခြင်း (IAT)  အရာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနေ့စဉ်ဘဝ (စသည်တို့ကိုအလုပ်, အိပ်ပျော်ခြင်းဆက်ဆံရေး,) disrupts ဖို့ဒီဂရီဖုံးအုပ်နေတဲ့ 20-ကို item စကေးဖြစ်ပါသည်, ရမှတ် 20 ထံမှ 100 ဖို့နေကြပါတယ်။ အတိုင်းအတာ၏ပြည်တွင်းရေးယုံကြည်စိတ်ချရ 0.93 ဖြစ်ပါတယ်။
positive နဲ့ negative ဇယားအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု (PANAS)  သင်တန်းသားများကို '' အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ 20-ကို item မေးခွန်းလွှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသားများကို) အလွန် = 1 ထံမှ = အလွန်အနည်းငယ်5အထိပစ္စည်းကိုရည်မှတ်ဟာသူတို့ရဲ့ခံစားချက်များ၏ပြင်းထန်မှုနဲ့ကိုက်ညီသောအရေအတွက်ကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်သည်နှင့်စုစုပေါင်းရမှတ် 10-50 ကနေအထိနိုင်ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောအကြေးခွံ၏ပြည်တွင်းရေးယုံကြည်စိတ်ချရ 0.90 ဖြစ်ပါတယ်။
Spielberg စရိုက်များ-ပြည်နယ်တော့ပူပန် Inventory (Stay-T က / S) ကို  နှစ်ရှည်လများပုံစံများ (ရိုစိုးရိမ်စိတ်) နှင့်လက်ရှိစိုးရိမ်ပူပန် (ပြည်နယ်) ၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှုန်းထားများဘေးဒဏ်သင့်, သိမြင်မှုနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ဇီဝကမ္မသရုပ်။ တစ်ဦးချင်းစီစကေးများအတွက်စုစုပေါင်းရမှတ် 20 ထံမှ 80 ဖို့နေကြပါတယ်။ အတိုင်းအတာ၏ပြည်တွင်းရေးယုံကြည်စိတ်ချရ 0.93 ဖြစ်ပါတယ်။
Beck ရဲ့စီးပွားပျက်ကပ် Inventory (BDI)  လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်ကျော်ခံစားချက်တွေကိုအကြောင်းကိုမေးမြန်းခြင်းမှတဆင့်စိတ်ကျရောဂါ၏လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာအကဲဖြတ်ထားပါသည်တစ် 21-ကို item မေးခွန်းလွှာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရမှတ်0ထံမှ 63 ဖို့နေကြပါတယ်။ အတိုင်းအတာ၏ပြည်တွင်းရေးယုံကြည်စိတ်ချရ 0.93 ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်စ်ဖို့လီဗာပူးလ်ခံစားချက်နှင့်အတွေ့အကြုံများစာရင်း - အကျဉ်းချုပ်ဗားရှင်း (အို-LIFE (ခ))  ပုံမှန်လူဦးရေအတွက် schizotypy တိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းလေး subscales (ပုံမှန်မဟုတ်သောအတွေ့အကြုံများ, သိမြင်မှုစနစ်တကျ, လူကန်လန် anhedonia နှင့်ထကြွလွယ်သော Non-ညီ) ၏ပါဝင်သည်ဟုတစ် 43 ကို item စကေးဖြစ်ပါသည်။ ချိန်ခွင် 0.72 နှင့် 0.89 အကြားပြည်တွင်းရေးယုံကြည်စိတ်ချရရှိသည်။
Autistic Spectrum လဒ် မေးခွန်းပုံစံ (aq)  တစ်ဦး ASD ရောဂါချို့တဲ့တစ်ဦးချင်းအပိုင်စေခြင်းငှါ autistic စရိုက်များများ၏အဆင့်ကိုတိုင်းတာသည်။ ဤသည်မေးခွန်းလွှာယေဘုယျအား Asperger ရဲ့ syndrome ရောဂါသို့မဟုတ်မြင့်မားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာကိုညွှန်းအဖြစ်အကြံပြုထားကြောင်း 50 တစ်ရမှတ်အတူ 32 မေးခွန်းများကိုပါဝင်ပါသည်။ အတိုင်းအတာ၏ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှု 0.82 ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးအတော်လေးအခန်းထဲမှာတစ်ဦးတည်းထိုင်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအတိုချုပ်မိတ်ဆက်ပြီးနောက်သူတို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှု (ထို PANAS နှင့် Stay-S ကအမြဲနောက်ဆုံးပြီးစီးခဲ့သောသောချွင်းချက်နှင့်တကွ, သင်တန်းသားများကိုကျပန်းနိုင်ရန်အတွက်ပေးထားသော) ၏ဘက်ထရီဖြည့်စွက်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများဖြည့်ပြီးနောက်သင်တန်းသားများကို 15 မိနစ်များအတွက်အခန်းထဲမှာကွန်ပျူတာကနေတဆင့်အင်တာနက်သုံးစွဲနိုင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သူတို့သွားရောက်လည်ပတ်သောဆိုဒ်များများ၏ content ဒီလေ့လာမှုတှငျမှတျတမျးတငျထားမခံခဲ့ရ, နှင့်သင်တန်းသားများကိုဤကိစ္စတွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အတိအလင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသူတို့ဘယ်လောက်ပဲရှိနေ site ၏ content တွေကိုလူမှုရေးအရသင့်လျော်သောအဖြစ်မှတ်စေခြင်းငှါရှိမရှိ၏, ဆန္ဒပြုနိုင်ပါသည်သမျှ site ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့သူတို့ကိုအားပေးတိုက်တွန်းရန်မွေးစားခဲ့ပါတယ်။ 15 မိပြီးနောက်သူတို့ PANAS နှင့် Stay နောက်တဖန် questionnaires ဖြည့်စွက်ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
စားပွဲတင် 1 အင်တာနက်စွဲလမ်းစမ်းသပ်မှု (IAT) နဲ့အားလုံး psychometric ကြိုတင်အင်တာနက်ထိတွေ့မှုခေါ်ဆောင်သွားအစီအမံများနှင့်၎င်းတို့၏ Spearman ဆက်စပ်မှုကိန်းများအတွက်နည်းလမ်း (စံသွေဖီ) ပြသထားတယ်။ အဆိုပါနည်းလမ်း၏စစ်ဆေးရေးတစ်ခုလုံးအတိုင်းနမူနာသောဤ psychometric အကဲဖြတ်များအတွက်မျှော်မှန်းအကွာအဝေးအတွင်းကျဆင်းသွားကြောင်းပြသထားတယ်။ အဆိုပါ Spearman ရဲ့ဆက်စပ်မှုအင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ (BDI), schizotypal ထကြွလွယ်သော nonconformity (OLIFE IN) အကြားနှင့်လည်းအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ-စရိုက်များ (aq) နဲ့ခိုင်မာတဲ့အသင်းအဖွဲ့များဖော်ပြခဲ့တယ်။ အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်နှစ်ရှည်လများစိုးရိမ်ပူပန် (Stay-T က), နှင့်အပျက်သဘောခံစားချက် (PANAS-) အကြားအားနည်းအသင်းအဖွဲ့များလည်းရှိခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 1 ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းစမ်းသပ်မှု (IAT) နဲ့အားလုံး psychometric အတိုင်းအတာနှင့်၎င်းတို့၏ spearman ဆက်စပ်မှုကိန်းများအတွက်နည်းလမ် (စံသွေဖီ) ။
Tသူကနမူနာထို့နောက် lower- နှင့်အဆင့်မြင့်-ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုအုပျစုမြား၏အုပ်စုများကိုထုတ်လုပ်ဖို့ IAT ရမှတ်များအတွက်အတောအတွင်းမှာအပိုင်းပိုင်းခွဲသဖြင့်, အဆိုပါ IAT များအတွက်ယုတ် 41 ခဲ့သည်လည်းပြဿနာအသုံးပြုမှုအချို့ကိုဒီဂရီရောင်ပြန်ဟပ်ခေါ်ဆောင်သွားသော ။ ဤသည် (ကအောက်ပိုင်း-ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းအဖွဲ့ကိုထုတ်လုပ်n = 28, ယုတ် = 29.5+7.9; 13 အထီး, 15 အမျိုးသမီး) နှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မား-ပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုအုပျစု (n = 32 ဆိုလို 50.3+7.2; 18 အထီး, 18 အမျိုးသမီး) ။
ပုံ 1 ချက်ချင်းအုပ်စုနှစ်စုအဘို့အင်တာနက်ထိတွေ့ပြီးနောက်ပြည်နယ်စိုးရိမ်ပူပန် (SSAI), အပြုသဘောခံစားချက် (PANAS +) နှင့်အပျက်သဘောခံစားချက် (PANAS-) အတွက်ပြောင်းလဲမှု, ဆွေမျိုးနိုင်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှု, ပြသထားတယ်။ higher-ပြဿနာအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနိမ့်-ပြဿနာအုပ်စုလက်ရှိစိုးရိမ်စိတ်အတွက်သိသိသာသာ သာ. ကွီးမွတျတိုး, မန်း-Whitney ရှိခဲ့သည် U = 318.5, p<.05; Wilcoxon သည်အင်တာနက်ကိုအကြိုအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စိတ်များတိုးလာကြောင်းဖော်ပြသည့်အနိမ့်ဆုံးအုပ်စုဖြစ်သည် z = 2.09, p<.05, ဒါပေမယ့်အသုံးပြုမှုမြင့်မားသောအုပ်စုအတွက်ပြောင်းလဲမှုမရှိပါ p> .70 ။ higher-ပြဿနာအသုံးပြုမှုအုပ်စုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်အတွက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်တစ်စက်အောက်ပိုင်း-ပြဿနာအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါရှိခဲ့သည်, U = 234.0, p<.001; အခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိပြောင်းလဲမှုရှိသည့်အသုံးပြုသူနည်းသောအုပ်စု၊ p> .20, သို့သော်အသုံးပြုသူအဆင့်မြင့်အုပ်စုသည်အပြုသဘောစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်စွာကျဆင်းခြင်း၊ z = 3.31, p<.001 မည်သည့်အုပ်စုအတွက်မဆိုအင်တာနက်နှင့်ထိတွေ့ခြင်း၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုမရှိပါ ps> .10
ပုံ 1 ။ နိမ့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး (အနိမျ့) နှင့်မြင့်မားသောအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီး (High) အုပ်စုများနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ပြီးဆုံးပြီးနောက်အကဲဖြတ်နှင့်ပြည်နယ်စိုးရိမ်ပူပန် (SSAI) တွင် Pre-အင်တာနက်အသုံးပြုမှု, အပြုသဘောခံစားချက် (PANAS +), နှင့်အပျက်သဘောခံစားချက် (PANAS-) တို့အကြားအပြောင်းအလဲကိုပြသ ။
နည်းနည်းပြဿနာအသုံးပြုမှုနှင့်အတူရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ '' အင်တာနက်စွဲ '' အပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏အလားအလာ differential ကိုသက်ရောက်မှုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ရည်ရွယ်လက်ရှိလေ့လာမှု။ ရလဒ် '' အင်တာနက်စွဲ '' ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်စိတ်အခြေအနေအပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏တစ်ဦးဒီကဗျာအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည်။ ဒီအကြိုးသကျရောအင်တာနက်စွဲလမ်း '' ၏သီအိုရီမော်ဒယ်များအတွက်အကြံပြုထားသည် , , နှင့်အလားတူတွေ့ရှိချက်အင်တာနက်လိင်စွဲအပေါ်ညစ်ညမ်းမှထိတွေ့မှု၏အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌လည်းမှတ်ချက်ပြုထားသည် , သောဤစှဲအကြားဆင်တူရိုးမှားအကြံပြုလိမ့်မည်။ စှဲ၏ခွဲခြားအတှကျလိုအပျကြောင့်ခံစားချက်ပေါ်မှာဤအနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုတစ်ခုဆုတ်ခွာအကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ်ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအကြံပြုရကျိုးနပ်သည်, အကြံပြု , , . ဤသည်တွေ့ရှိချက်ပြဿနာအပြုအမူတွေ၏အခြားပုံစံများနှင့်ဝသကဲ့သို့, ထိုအကြံပြု , နှင့်xcessive အင်တာနက်အသုံးပြုမှုလွတ်မြောက်ရန်-ထိန်းသိမ်းထားမည်အကြောင်း,  နှင့် Self-fuel - ထိုအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုထို့နောက်နိမ့်စိတ်ဓါတ်များထံမှမှလွတ်မြောက်ရန်နောက်ထပ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းထားတဲ့စိတ်ဓါတ်များ, ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ . အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏ပြဿနာအင်တာနက်သုံးစွဲသူများတွင်တွေ့မြင်စိုးရိမ်စိတ်အပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိခြင်းကိုလည်းအန္တရာယ်-ဝန်ကိုထမ်းရွက်အခြေအနေထိတွေ့မှုအပေါ်ပြဿနာလောင်းကစားသမားတွေအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာဖြစ်ပါတယ် , , နောက်တဖန်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်ပြဿနာအပြုအမူတွေ၏အခြားပုံစံများအကြားဆင်တူရိုးမှားအကြံပြုထားသည်။
အပြင် '' အင်တာနက်စွဲ '' အပေါ်အင်တာနက်ထိတွေ့မှု၏ differential ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ၏ဆန္ဒပြပွဲကနေမှတ်ချက်ထိုက်ခဲ့တွေ့ရှိချက်အတော်များများရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ အင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါများအကြားအသင်းအဖွဲ့များ , နှင့် schizotypal ထကြွလွယ်သော nonconformity ,  ပြီးသားလူသိများနှင့်လက်ရှိနမူနာယခင်ကလေ့လာခဲ့သူတို့အားဆင်တူကြောင်းသရုပ်ပြနေကြသည်။ သို့သျောထိုအင်တာနက်စွဲလမ်း autistic စရိုက်များမှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်စပ်ခဲ့, တစ်ဝတ္ထုတွေ့ရှိချက်ဖြစ်ပါတယ် နှင့်လူမှုရေးအထီးကျန်နှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအကြားယခင်ကထူထောင်အသင်းအဖွဲ့များမှသဘာဝအလားတူဖြစ်နိုင်သည် ။ ဒါကအဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက်နောက်ထပ်လေ့လာမှု၏အလားအလာစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ထိုက်တန်သည်, သို့သော်ဤအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အကြောင်းပြချက်လက်ရှိမသိရသေးဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ၏မြင့်မားသောစရိုက်များနှင့်အတူသူတွေကိုပိုပြီးအပြန်အလှန်တစ်ဦးနှစ်သက်သောနည်းလမ်းအဖြစ်အင်တာနက်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အရာကိစ္စများတွင်ပိုမိုမြင့်မားအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုကဒီအုပ်စုထဲမှာပြဿနာဖြစ်မည်မဟုတ်ပါ။ တနည်းအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသဘာဝအားဖြင့်သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါ, အဆိုပါဒီဂရီသောဤဖြစ်ပေါ်ငှါ၎င်း, ပါဝင်သူဒီထုံးစံ၌ဖြစ်ပါသည်မကြာခဏလူမှုရေးအထီးကျန်အခြေအနေများထဲမှာ, အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာအားတုံ့ပြန်မှုအပေါ် impact စေခြင်းငှါ autistic စရိုက်များနဲ့ spurious အသင်းအဖွဲ့ပေးခြင်းစကေး။ ရှင်းနေသည်မှာနောက်ထပ်အလုပ်ကဒီဒေသမှာလိုအပ်နေပါသည်။
အပြင်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူသူတို့၏အစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သောသည်ဤတွေ့ရှိချက်များအနေဖြင့်လက်ရှိအချက်အလက်များ၏နှစ်ခု features တွေမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ကြသည်။ ပထမဦးစွာနမူနာ (50 / 32) ၏ 60 ကျော်% ပြဿနာအပြုအမူအချို့ကိုဒီဂရီကိုယ်စားပြုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သော IAT အပေါ်ရမှတ်ကိုထုတ်လုပ် ။ ဤသည်ပုံတူကူးယူ, hereto အကြံပြုမဟုတ်ပြဿနာတစ်ခုအဆင့်ကိုအကြံပြုလိုလျှင်, တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအပေါ်အငယ်ကလူကနေနမူနာကိုစုဆောင်းတဲ့ function ကိုကိုယ်စားပြုသည်, ဒါပေမယ့်လိမ့်မည်။ မပါဘဲသူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူသူတို့၏အကျား, မကွဲပြားမှုအထီးပြဿနာအဖြစ်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ပုံမှန်အမြင်များ (ဆက်ဆက်ယခု) အခြေအမြစ်မရှိဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တစ်ဦးဖော်ပြခဲ့တဲ့သင့်ကြောင်းလက်ရှိလေ့လာမှု၏ကန့်သတ်အရေအတွက်နှင့်အရာနောက်ဆက်တွဲသုတေသနအတွက်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်ရှိပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုများတွင်ပါဝင်သူများအင်တာနက်ကိုသာ 15 မိထိတွေ့မှုပေးခဲ့, သူတို့၏စိတ်ဓါတ်များပေါ်မှာဤထိတွေ့မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ ထိတွေ့မှု၏ဤအရှည်ခံစားချက်တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုထုတ်လုပ်ရန်လုံလောက်ပေမယ့်လက်ရှိအကြေးဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, ဘာကိုကြာကြာထိတွေ့ခြင်းကြိမ်မယ်လို့လူသိများ, မလက်ရှိအချိန်တွင်လူသိများအင်တာနက်ထိတွေ့မှုကာလအတွင်းစိတ်ဓါတ်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများကို၏ယာယီပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါ။ ထိုမှတပါး, ထိတွေ့မှု၏သူတို့ရဲ့ကာလအတွင်းသင်တန်းသားများအားဖြင့်သွားရောက်ခဲ့ပြီးက်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရပါဘူး။ ဒါဟာလွတ်လပ်စွာသူတို့စေလိုကြောင်းဆိုလမ်းထဲမှာအင်တာနက်ကိုစူးစမ်းဖို့သင်တန်းသားများကိုအားပေးဖို့ပြုလေ၏။ ကသင်တန်းသားများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသောအရာကိုက်ဘ်ဆိုက်များအချို့မဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်သို့သော်, ဤသူတို့လေ့လာစူးစမ်းဖို့အင်တာနက်ကိုသုံးကြောင်းပုံမှန်က်ဘ်ဆိုက်များဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကောက်ချက်ချရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဤဆိုဒ်များညစ်ညမ်းသို့မဟုတ်လောင်းကစားအကြောင်းအရာများနှင့်အတူသူတွေကိုထည့်သွင်းလျှင်၏သင်တန်း, ဤသည်လက်ရှိအခြေအနေတွင်သွားရောက်လည်ပတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်ထိုသို့သောက်ဘ်ဆိုက်များယုံကြည်စိတ်ချရသောမည်သည့်ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှု၏ဆက်စပ်လည်ပတ်မှုခံနေရအဖြစ်အစီရင်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ သို့သော်ဤကန့်သတ်ပေးထားပါကနေဆဲဤအခြေအနေတွင်ရရှိသောခံစားချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုအလားတူအသုံးပြုမှုကအခြားအခင်းအကျင်းအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမည်ဖြစ်ကြောင်း, ဤလေ့လာမှု၏လိုအပ်ချက်အတွက်ဧရိယာဖြစ်နေဆဲရှိမရှိမသိရသည်။
ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားအဲဒီရလဒ်တွေကိုအလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏ distal နှင့် Proximity အကြောင်းတရားများ၏ရုပ်ပုံတည်ဆောက်ရန်ကူညီပေးသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူမုချထို  နှင့်စိုးရိမ်ပူပန် လူမှုရေး, အထီးကျန်မှုတွေနဲ့အတူ coupled ဝတ္ထုနည်းပညာများအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, မရှိခြင်း , , အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်စွန့်စားမှာဖြစ်စေခြင်းငှါ , ။ သို့သျောလညျး, ထို့နောက်အင်တာနက်ထိတွေ့မှုအပြီးအပြုသဘောခံစားချက်အပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားသောသူတို့အားတစ်ဦးချင်းစီ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ပြီးတော့အင်တာနက်စွဲများတွင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုထိန်းသိမ်းတဲ့ဖြစ်နိုင်သောယန္တရားအကြံပြုခြင်းနောက်ထပ်ထွက်ပေါက်-လှုံ့ဆော်မှုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုသို့အစပျိုးစေခြင်းငှါ
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: MR LAO PR စနစ်။ MR: အစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: MR PR စနစ်။ ဓါတ်ကူပစ္စည်း / ပစ္စည်းများ / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools များလှူဒါန်းခဲ့: ကျွန်တော့ PR စနစ်။ MR LAO RT ကို PR စနစ်: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
မစ်ချယ် P ကို ​​(2000) အင်တာနက်စွဲ: စစ်မှန်သောရောဂါသို့မဟုတ်မဟုတ်လော The Lancet 355: 632 ။ Doi: 10.1016/S0140-6736(05)72500-9. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
DSM-V ကိုများအတွက် block JJ (2008) ကိစ္စများ: အင်တာနက်စွဲလမ်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 165: 306-307 ။ Doi: 10.1176 / appi.ajp.2007.07101556. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ပြဿနာအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက် Aboujaoude အီး, ကိုရမ်ကျမ်း LM, Gamel N ကို, အကြီးစား MD, Serpe RT ကို (2006) နိုင်သည့်အလားအလာ, အမှတ်အသားများ: 2,513 အရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကတယ်လီဖုန်းစစ်တမ်း။ CNS Spectr 11: 750-755 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Kuss: D, Griffiths က M ကို (2012) အင်တာနက်ကိုဂိမ်းစွဲ: ပင်ကိုယ်မူလသုတေသနတစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်စွဲ 10 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်: 278-296 ။ Doi: 10.1007/s11469-011-9318-5. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Griffiths M (၂၀၁၂) အင်တာနက်လိင်စွဲချက် - လက်တွေ့သုတေသနကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ စွဲသုတေသန & သီအိုရီ 2012: 20-111 ။ Doi: 10.3109 / 16066359.2011.588351. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Leung L ကို, ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အင်တာနက်စာတတ်မြောက်ရေး, အင်တာနက်စွဲရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အင်တာနက်ကိုလှုပ်ရှားမှုများကို Lee က: P (2012) သက်ရောက်မှု။ လူမှုရေးသိပ္ပံ Computer ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 30: 403-418 ။ Doi: 10.1177 / 0894439311435217. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Tonioni က F, et al က D'Alessandris L ကို, လိုင်ကို C, Martinelli က D:, Corvino S က။ (2012) အင်တာနက်စွဲ: အွန်လိုင်းသုံးစွဲနာရီ, အပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများ။ အထွေထွေဆေးရုံကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 34: 80-87 ။ Doi: 10.1016 / j.genhosppsych.2011.09.013. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Alizadeh Sahraee အို Khosravi Z ကို, Yusefnejad M (2011) အီရန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားမိသားစုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်အတူအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်း၏ဆက်ဆံရေးမျိုး။ ဥရောပစိတ်ရောဂါကုသမှု။
Guangheng: D, Qilin L ကို, Hui Z ကို, Xuan Z ကို (2011) ရှေ့ပြေးသို့မဟုတ် sequela: အင်တာနက်စွဲခြင်းရောဂါနှင့်အတူလူအတွက်ရောဂါဗေဒမမှန်။ Plos ONE 6: 1-5 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Gundogar တစ်ဦးက, Bakim B, Ozer အို Karamustafalioglu အို (2012) အထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားအင်တာနက်စွဲလမ်း, စိတ်ကျရောဂါနှင့် ADHD အကြားအသင်းအဖွဲ့။ ဥရောပစိတ်ရောဂါကုသမှု 2; 271 ။
လူငယ်တို့ KS, ရော့ဂျာ RC (1998) စိတ်ကျရောဂါနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ ဆိုက်ဘာစိတ်ပညာနှင့်အပြုအမူ 1: 25-28 ။ Doi: 10.1089 / cpb.1998.1.25. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ယန်း JY, Ko CH, ယန်း CF, Wu hy, ယန် MJ (2007) အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ comorbid စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေ: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), စိတ်ကျရောဂါ, လူမှုရေး phobia နှင့်ရန်လိုမုန်းတီးမှု။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး 41 ၏ဂျာနယ်: 93-98 ။ Doi: 10.1016 / j.jadohealth.2007.02.002. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ကင်မ်ဂျေ, Haridakis pm တွင် (2009) အင်တာနက်စွဲလမ်း၏သုံးဖက်မြင်ရှင်းပြအတွက်အင်တာနက်အသုံးပြုသူဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Computer ကို-ဖျန်ဖြေ Communication14 ၏ဂျာနယ်: 988-1015 ။ Doi: 10.1111 / j.1083-6101.2009.01478.x. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ဘာနာဒီက S, Pallanti S ကို (2009) အင်တာနက်စွဲ: comorbidities နှင့် dissociative လက္ခဏာတွေပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေတဲ့ဖော်ပြရန်လက်တွေ့လေ့လာမှု။ ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု 50: 510-516 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2008.11.011. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Jiang မေး, တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု, အသိအမြင်-အသိပညာ, နှင့်အင်တာနက်အလေ့အထကိုပြောင်းလဲဆန္ဒအပေါ်တစ်ဦးကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အဖြစ်အင်တာနက်စွဲ၏လက်ခံမှု၏ Leung L ကို (2012) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ လူမှုရေးသိပ္ပံ Computer ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 30: 170-183 ။ Doi: 10.1177 / 0894439311398440. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Lee က H ကို, Choi J ကို, ရှင် Y ကို, Lee က J ကို, Jung H ကို, et al ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းအတွက် (2012) Impulse: ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ်။ Cyberpsychology, အပြုအမူများနှင့်လူမှုရေးကွန်ရက် 15: 373-377 ။ Doi: 10.1089 / cyber.2012.0063. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ko CH, Hsiao S ကိုလျူ GC, ယန်း JY ယန် MJ, et al ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း, အန္တရာယ်ယူအလားအလာများနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အတူကောလိပ်ကျောင်းသား၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများ (2010) အဆိုပါဝိသေသလက္ခဏာများ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန 175: 121-125 ။ Doi: 10.1016 / j.psychres.2008.10.004. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ပန်းခြံက S, et al ပန်းခြံ Y ကို, Lee က H ကို, Jung H ကို, Lee က J ကို။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အင်တာနက်စွဲလမ်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်အပြုအမူတားစီး / ချဉ်းကပ်မှုစနစ်၏ (2012) အဆိုပါဆိုးကျိုးများ။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ။
ko CH, Jen JY, လျူ SC, Huang က CF, ယန်း CF (2009) မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ရန်လိုသည့်အပြုအမူများနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုအကြားအသင်းအဖွဲ့။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကနျြးမာရေး 44 ၏ဂျာနယ်; 598-605 ။
Ma H (၂၀၁၂) မြီးကောင်ပေါက်များ၏အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာလူမှုရေးဆိုင်ရာအင်တာနက်အပြုအမူ။ ကလေးသူငယ်ကျန်းမာရေးနှင့်လူသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ် ၅၊ ၁၂၃–၁၃၀ ။ Doi: 10.1100 / 2011 / 308631. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Davis က RA (2001) ရောဂါဗေဒအင်တာနက်အသုံးပြုမှုတစ်ဦးကသိမြင်မှု-အပြုအမူမော်ဒယ်။ လူ့အပြုအမူ 2001 17 အတွက်ကွန်ပျူတာများ: 187-195 ။ Doi: 10.1016/S0747-5632(00)00041-8. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ရှငျဘုရငျ: D, Delfabbro P ကို, Griffiths က M ကို, Gradisar M (2011) အင်တာနက်စွဲလမ်းကုသမှုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအကဲဖြတ်: တစ်ဦးကစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်ဖှဲ့အကဲဖြတ်။ လက်တွေ့စိတ်ပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း 31: 1110-1116 ။ Doi: 10.1016 / j.cpr.2011.06.009. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
တစ်ဦးစံသိမြင်-အပြုအမူကုထုံးချဉ်းကပ်မှု၏ထိရောက်မှုအပေါ်ပထမဦးဆုံးရလဒ်များကို: K သည်, Muller K ကို Beutel M (2012) အင်တာနက်စွဲလမ်းကုသခြင်းWölfling။ ဥရောပစိတ်ရောဂါကုသမှု 271 ။
Israelashvili M၊ Kim T, Bukobza G (၂၀၁၂) ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဆိုက်ဘာကမ္ဘာကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်း - အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာစူးစမ်းရှာဖွေခြင်း? မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် 2012 ၏ဂျာနယ်: 35-417 ။ Doi: 10.1016 / j.adolescence.2011.07.015. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Kugler T က, Connolly T က, Ordóñez ld (2012) Emotion, ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အန္တရာယ်: လူတွေအပေါ်အလောင်းအစားနှိုင်းယှဉ်လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ် Betting ။ 25-123: 134 ပြုလုပ်ခြင်းအပြုအမူဆုံးဖြတ်ချက်၏ဂျာနယ်။ Doi: 10.1002 / bdm.724. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Hardy, E, Tee MY (2007) အလွန်အကျွံအင်တာနက်အသုံးပြုမှု: အင်တာနက်စွဲလမ်းအတွက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, အထီးကျန်ဆန်နှင့်လူမှုရေးထောက်ခံမှုကွန်ရက်များ၏အခန်းကဏ္ဍ။ & Emerging Technologies ကများနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်း5၏သြစတြေးလျဂျာနယ်: 34-47 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (1994) Diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲဝါရှင်တန်ဒီစီ (4th ed ။ ): ။ ယား။
Greenfield DN (2012) ရဲ့ Virtual စွဲ: တခါတရံမှာနည်းပညာအသစ်အသစ်သောပြဿနာများကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ virtual စွဲ။
Young ကငွေကျပ် (1998) အဆိုပါ Net ကဖမ်းမိ။ John Wiley & Sons, New York ။
Watson ဟာ: D, Clark က LA က, အပြုသဘောနှင့်အနုတ်လက္ခဏာ၏အကျဉ်းအစီအမံများ Tellegen တစ်ဦးက (1998) ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် validation ကိုထိခိုက်စေ: အဆိုပါ PANAS ကြေးခွံ။ 54-1063: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုစိတ်ပညာ 1070 ၏ဂျာနယ်။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Spielberg CD ကို (1983) ပြည်နယ်-စရိုက်များတော့ပူပန် Inventory Stay (Form ကို Y ကို)။ Palo Alto, CA: အတိုင်ပင်ခံစိတျပညာစာနယ်ဇင်း, Inc
Beck ကို AT, ရပ်ကွက် CH, Mendelson M က, ကဲ့ရဲ့ J ကို, Erbaugh J ကို (1961) စိတ်ကျရောဂါကိုတိုင်းတာဘို့တစ်ခုစာရင်း။ အထွေထွေစိတ်ရောဂါကုသမှု4၏မော်ကွန်း: 561-571 ။ Doi: 10.1001 / archpsyc.1961.01710120031004. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Mason ဆို, အို Linney Y ကို, Claridge, G (2005) က Short အကြေးခွံ schizotypy တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ Schizophrenia သုတေသန 78: 293-296 ။ Doi: 10.1016 / j.schres.2005.06.020. အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Baron-Cohen S, Wheelwright S, Skinner R, Martin J, Clubley E (၂၀၀၁) Autism-Spectrum Quotient (AQ) - Asperger ရောဂါလက္ခဏာ / မြင့်မားသောလည်ပတ်မှုရှိသည့် Autism၊ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၊ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်သင်္ချာပညာရှင်များ။ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ & ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Disorders 2001 ဂျာနယ်: 31-5 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်